IGAD oo kahadashay xaaladaha Soomaaliya - Tilmaan Media
Waxaa shalay habka araga fog shir ku yeeshay madaxda Urur Goboleedka IGAD. Madaxwaynahay Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirka kaqayb galay ayaa ka war bixiyay sida wanaagsan ee dowladdiisu uga shaqaysay xakamaynta xanuunka Korona Fayras.
IGAD ayaa boorisay dadaalada ay Dowladda Federaalka ah waddo si isfaham looga gaaro doorashooyinka dalka in ay ka dhacaan la rajaynayo.
Sidoo kale IGAD waxay soo dhawaysay wadahadallada u bilawday Soomaaliya iyo Somaliland ee ay dhexdhexaadisay Jamhuuriyadda Jabuuti.
“Waxaan bogaadinaynaa wadaxaajoodka socda ee u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ee ay garwadeenka ka yihiin Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ra’isulwasaarae Abiye Axmed, waxaanan rajaynaynaa in ay nasoo gaaraan warbixinada ku saabsan horumarka ay guddiyada farsamo ka sameeyeen wadahadalka ee ku aaddan xal waara”. ayaa lagu yiri war kasoo baxay IGAD.
Ugu dambayn shirku wuxuu bogaadiyay kaalinta muhiumka ah ee AMISOM uga jirto sugidda amniga Soomaaliya iyo taageeridda Ciidanka Xooga Dalka. Waxaana laxusay in Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya billaabay lawareegida sugidda amniga dalka.